Tamarta cadceedda ee loo yaqaan 'Photovoltaic tamarta', hoggaamiyaha la cusbooneysiin karo | Cusbooneysiinta Cagaaran
Sida laga soo xigtay Maamulaha Hay'adda Caalamiga ah ee Tamarta (IEA), Fatih Birol: Sawirka qoraxda wuxuu ahaa markii ugu horreysay isha tamarta cusub ee koray dhakhso badan sanadkii 2016. Hay'addu waxay ku tilmaamtay xogta "war aad u fiican".
Markaad gudbineyso warbixintaada sanadlaha ah Cusboonaysiinta 2017, Birol ayaa tilmaamay in “ka dib markii la qiimeeyay dhamaan noocyada shidaalka - saliida, gaaska, dhuxusha, dib u cusbooneysiinta - iyo saameynta ay ku leeyihiin suuqyada tamarta, midka diirada la saaray dib u cusbooneysiinta ayaa muujinaya war aad u fiican warshadaha".
1 Tamarta cadceedda
2 Dagaalka tamarta waa 20 sano kadib
3 Awoodda qoraxda way la tartami kartaa qof kasta
4 Qaybaha qoraxda ee ku shaqeeya insolation hooseeya
4.1 Maaddooyin cusub oo nuugaya qorrax badan
Falanqaynta 2016 waxay muujisay in awoodda cusub ee qoraxda PV (photovoltaic) ay korodhay 50% iyo in Shiinaha uu ahaa waddanka ku dhowaad kalabar awooddiisa loo aaneeyay. ballaarinta adduunka. "Marka laga dambeeyo sheekada guusha ee la cusbooneysiin karo, waxaan heleynaa laba darawal oo waaweyn: taageero xoog leh oo loogu talagalay siyaasadaha dowladda iyo hagaajinta tikniyoolajiyadda," ayuu yiri maareeyaha.
Markii la duqeynayey qodobbada aasaasiga ah ee qoraalka, Birol wuxuu hoosta ka xarriiqay xawaaraha uu ku koray qorraxda PV sanadkii hore, taas oo markii ugu horreysay ka dheereysay kobaca ilaha kale ee tamarta.
Sida lagu sheegay warbixinta, dib-u-cusbooneysiintu waxay u dhigantaa ku dhowaad saddex-meelood laba meel awoodda tamarta cusub ee adduunka sanadkii la soo dhaafay, ku dhowaad 165 gigawatt, waxayna sii wadi doontaa inay saameyn xooggan ku yeelato sannadaha soo socda. Qoraalku wuxuu filayey koror ku yimaadda awoodda korantada oo ah 2022% kahor 43.
Xaqiiqdii, tamarta qorraxda, oo ka jaban sanadkii la soo dhaafay in ka badan 75%, horeba way uga jaban tahay nooc kasta oo tamar ah oo lagu soo saaro dhuxusha, saliida ama gaaska.
Tani waa wax weyn, laakiin kuma filna. Haddii tamarta qorraxda ay rabto inay noqoto ciyaaryahan caalami ah, waxay u baahan tahay inay noqoto ka faa'iido badan ilaha kale ee tamarta-gaaban: Waqtigaan hadda la joogo, marka lagu daro, in ka badan 50 dal, tamarta qorraxda ayaa ah tan ugu raqiisan dhammaan.
Dagaalka tamarta waa 20 sano kadib
In kasta oo aan caadiyan eegno sicirka wax soo saar halkii saac ee kilowatt, taasi maahan qiimaha ugu xiisaha badan ee korsashada tamarta la cusboonaysiin karo. Uguyaraan, xaalad la mid ah tan hadda jirta oo dib-u-cusboonaysiinta aysan u haysan kaabis ay ku bixiso maalgashiga.
Nidaamyada tamarta ee qaabdhismeedka waaweyn ee maalgashiga waxaa lagu sameeyaa dhowr sano oo rajo ah, xitaa tobannaan sano. Taasi waa mid ka mid ah sababaha qaadashada cusboonaysiinta ayaa gaabis ah: mar haddii la dhiso warshad nukliyeer, gaas, dhuxul (ama nooc kasta oo kale), macquul ma aha in la xiro illaa iyo inta ay ka dhamaaneyso nolosheeda waxtarka leh. Hadday ahaan lahayd, caadi ahaan maalgashiga lama soo ceshan lahaa, taas oo aan dhici doonin sababtoo ah lobbiisyada waaweyn ee halkaas ka jira.
Si kale haddii loo dhigo, haddii aan dooneyno inaan si faahfaahsan u baranno sida ay ka kooban tahay suuqa tamarta ay u kobcayaan, waa inaan eegno inta ay le'eg tahay kharashka ku baxa in laga billaabo tamar kasta meel laga soo baxo. Faa'iidada muddada-gaaban iyo muddada-dhexe ee dhirta korontada ayaa fure u ah go’aanka ugu dambeeya ee ganacsatada iyo siyaasiyiinta; Ama, haddii si kale loo dhigo, tamar aad u jaban in la soo saaro oo u baahan maalgashi bilow ah oo aad u sarreeya weligeed lama qaadan doono.
Awoodda qoraxda way la tartami kartaa qof kasta
Sida laga soo xigtay warbixinno dhowr ah oo ka yimid in ka badan hal jidh, oo ku saabsan warshadaha tamarta: «Awoodda qoraxda ee aan la baadhin ayaa bilaabeysa inay ka joojiso dhuxusha iyo gaaska dabiiciga ah suuqa Intaa waxaa dheer, mashaariicda cusub ee qoraxda ee suuqyada soo koraya ayaa ka qiimo yar dabaysha.
Iyo, runtii, ku dhowaad lixdan waddan oo soo ifbaxaya celceliska qiimaha rakibaadda qorraxda ee loo baahan yahay soo saarida megawatt kasta durba waxay hoos ugu dhacday $ 1.650.000, oo ka hooseeya 1.660.000 qiimaha tamarta dabaysha.
Sida aan ku arki karno garaafkii hore, isbeddelku wuu cad yahay. Tani waxay ka dhigan tahay in dalalka soo ifbaxaya, kuwaas oo guud ahaan ah kuwa leh kororka ugu badan ee qiiqa CO2.
Waxay heleen wado ay ku aadaan dhaliya koronto qiimo tartan ah iyo dariiq la cusboonaysiin karo.
Qaybaha qoraxda ee ku shaqeeya insolation hooseeya
Tamarta cadceedda had iyo jeer waxay leedahay cilad weyn: qadarka shucaaca qoraxda iyo saadaasha hawada. Maalmaha leh dabeylo badan, daruuro, roobab ama ceeryaan badan, xaddiga shucaaca qorraxda ee ku dhaca qoraxda ayaa ka yar. Sidaa darteed, xaddiga tamarta ee ay qoraxda awood u leedahay inay soo saarto aad ayey uga yar tahay. Tani waxay keenaysaa xasillooni darro xagga korontada ah.
Ujeeddada ayaa ah in la kordhiyo waxtarka beddelidda iftiinka tooska ah illaa aad aragto in badan oo ka mid ah shucaaca qorraxda mar labaad oo aad dhaliso tamar ku filan, in kasta oo xaaladaha saadaasha hawada dhalaalka ka dhig mid hoose.
Maaddooyin cusub oo nuugaya qorrax badan
Waxyaabaha awood u leh inuu nuugo qaddar badan oo iftiinka qorraxda ah ayaa ah olol LPP (Fosfooras muddo dheer soconaya) wuxuuna keydin karaa tamarta cadceedda maalintii si loo ururiyo habeenkii.
Kaliya iftiinka qayb ahaan la arki karo ayaa la nuugi karaa loona rogi karaa koronto, laakiin LPP Waxay ku keydin kartaa tamarta cadceeda qorraxda aan shidanayn ama u dhaw infrared infrared. Taasi waa, shey awood u leh inuu nuugo iftiinka muuqaal ballaaran sida infrared.
Waxaan xasuusnaa in farqiga udhaxeeya aaladda elektromagnetic-ka ee aadanuhu arki karo uu yahay gobolka muuqda. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira noocyo badan oo shucaac ah oo dhererkoodu kala dherer duwan yahay iyo xoog sida fallaadhaha infrared.
Thanks to baalalkan, qadar badan oo tamar ah ayaa lagu keydin karaa oo keliya qorraxda tooska ah, laakiin gobollada kale ee korantada elektromagnetic-ka ayaa sidoo kale loo beddeli karaa tamar koronto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta qorraxda ee loo yaqaan 'Photovoltaic tamarta', waa hoggaamiyaha la cusboonaysiin karo